China kwụ Desulfurization ụlọ ọrụ na ndị na-ebu ngwaahịa | Ngwa Delin
Flue Gas Desulfurization mgbapụta
Nlereanya: DSC (R) Usoro FGD mgbapụta Speed ​​(r / min): 550-740 ikike (l / s): ...
Kwụsị Izu Ike
Ihe owuwu nke a DG usoro gravel mgbapụta bu otu uzo, otu-sucti ...
Kol gravel mgbapụta
Ihe nlere: DSC (R) Usoro FGD mgbapụta
Ọsọ (r / min): 550-740
Ike (l / s): 1083-2722
Isi (m): 26-27
Kasị arụmọrụ: 85% -90%
Ike aro Pa (KW): -
Ekwe ka oke urughuru size (mm) ： -
Ngwunye mgbapụta (n'arọ): 4000-8300
Ihapu dia. (Mm): 500-800
Ntinye dia. (Mm): 600-900
Aldị akara: Mechanical seal
Impeller Uzo: 4, 5 Ihe liner: akwa chrome alloy / Rubber
Ụdị: - Ihe nke casing: Nkedo ígwè
Ihe: alloy dị elu Theory: mgbapụta Centrifugal
Obosara (mm): 700-1285 Structure: Single-ogbo mgbapụta
Hebei Delin Machinery bụ otu n'ime ndị kasị ibu mgbapụta ụlọ ọrụ pụrụ iche na n'ichepụta slurry nfuli na China, na ala ebe nke ihe karịrị 40,000m2na ebe a na-ewu ihe karịrị 22,000m2. A na-ejikarị ngwaahịa ndị a eme ihe maka ntụgharị nke mmiri, ngwuputa, metallurgy, atụmatụ obodo, ike, kol, FGD, mmanụ ala, ụlọ ọrụ kemịkalụ, imepụta ihe eji eme ụlọ, wdg. mmiri, otu-ogbo na na kehoraizin Ọdịdị, featuring uru nke sara eruba ọnụego, elu arụmọrụ na ume-azọpụta. FGD mgbapụta usoro nke kọmpat imewe na ohere-ichekwa. Dị ka ọkachamara slurry mgbapụta emeputa na soplaya na China, anyị mepụtara a dịgasị iche iche nke ihe maka DSC (R) usoro FGD nfuli.
Njirimara nke FGD Pump
1. CFD na-ese simulating analysis technology na nakweere maka mgbapụta mmiri akụkụ, na a pụrụ ịdabere na imewe na elu arụmọrụ. 2. Justgbanwegharị mgbakọ nwere ike ịgbanwe ọnọdụ impeller na olu, na-echekwa igwe mgbapụta na steeti na-arụ ọrụ nke ọma.
3. DSC (R) usoro FGD nfuli bụ nke azụ akụkụ disassembly imewe, nwere a dị mfe Ọdịdị, na-adị mfe ịnọgide na-enwe. Ọ dịghị mkpa ka a kwasasịa mmiri na mmiri na ọkpọkọ.
4. Ugboro abụọ-ahihia tapered ala biarin na-ruo eruo na a mgbapụta ọgwụgwụ, ala agba na a mbanye ọgwụgwụ. Nmechi na-ete mmanụ, na-eme ka ọnọdụ ọrụ ha dịkwuo mma ma na-agbatịkwu ọrụ ndụ.
5. Mechanical akara na-pụrụ iche maka katrij n'ibu akara eji na FGD mgbapụta usoro nke DSC (R) usoro FGD nfuli na a pụrụ ịdabere na ọrụ.
Ihe maka DSC (R) Series FGD mgbapụta
Anyị mepụtara ụdị ihe ọhụrụ - duplex phase steel white iron - nke kachasị mma maka ngwaọrụ FGD. Site na ngwongwo na-egbochi abrasive nke duplex anaghị agba nchara na corrosion na-eguzogide nke elu chrome ọcha ígwè, ihe ruru eru maka FGD usoro.
1. mgbapụta casing, mgbapụta mkpuchi na nkwụnye efere na-amị mgbali akụkụ nke ka nke ductile ígwè na agbakọta na roba.
2. Impeller, mmiri mkpuchi / n'ihu liner fanye na-mere nke duplex adọ anaghị agba ọcha ígwè.
3. Ogwe ihu dị n'ihu, eriri azụ, ntinye ntinye azụ bụ nke roba nke nwere ezigbo ihe na-emebi emebi, ịdị arọ na ọnụ ala.
.Dị Ike (Ajụjụ) Isi (H) Ọsọ (n) Arụ ọrụ ŋ NPSH Igbapụta Dia./suction Dia.
.Dị A BB B D E1 E2 F * Nkeji h1 Ogbe h2 J K M L1 L2 d Ibu (n'arọ)
600DSC (R) 1855 960 850 670 110 50 667 35 40 120 284 525 330 610 Ogbolu 39 4580
700DSC (R) 2315 1300 1100 895 130 75 768 40 45 150 355 583 375 720 Ochoko 7280
800DSC (R) 2460 1300 1100 885 135 75 933 40 45 150 355 712 550 800 Ochoko 8300
.Dị N P1 P2 Q * T1 * T2 * U1 U2 NW2 DI2 N2 Di2 NJ2 NW1 DI1 N1 D1 NJ1
Ugboro abụọ casing FGD mgbapụta
Single Stage Single mmiri FGD mgbapụta